ကွန်ပြူတာ စက်ပစ္စည်းတွေဟာ အချိန်မရွေး ပျက်ဆီးနိုင်တဲ့အတွက် သင့်ရဲ့အဖိုးတန် ဖိုင်တွေကို Backupလုပ်ထားသင့်ပါတယ်။External Storage Deviceတွေမှာ Backupလုပ်နိုင်သလို Online Backup Servicesတွေမှာလည်း Backupလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အခုဆောင်းပါးမှာ အကောင်းဆုံး Online Backup Services(၅)ခုကိုဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။
Carbonite Client Applicationက သင့်ကွန်ပြူတာရဲ့ Backgroundမှာ Runနေမှာဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့documents, music, email, and other files တွေကို Automatically Backupလုပ်ပေးနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Videoဖိုင်တွေကိုတော့ Manually Backupလုပ်ရမှာပါ။ Carboniteကို Windows and OS Xမှာသုံးနိုင်ပြီး Home Plus and Home Premier plansအသုံးပြုသူတွေ အတွက်တော့ Windowsကိုပဲ Support ပေးပါတယ်။ ဖိုင်တွေကို Encrypt လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး Unlimited Storage ရရှိမှာပါ။ Home Plus plan အသုံးပြု သူတွေကတော့ ကွန်ပျူတာက ဖိုင်တွေအပြင် External Hard Drive ကဖိုင်တွေကိုပါ Backup လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Full System Image ကိုပါ Backup လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Home Premier plan မှာအပေါ်က Featuresအပြင် Video ဖိုင်တွေကိုပါ Automatically Backupလုပ်ပေး နိုင်ပါတယ်။Carboniteကိုစမ်းသပ် အသုံးပြုချင်ရင် ၁၅ ရက် စမ်းသပ် သုံးနိုင်ပါတယ်။ Carboniteရဲ့ Plans & Pricingအသေးစိတ်ကို ဒီမှာဆက်ဖတ်ပါ။
Backblazeကတော့ နည်းပညာကို သိပ်နားမလည်သူတွေအတွက် သင့်တော်ပြီးအလွယ်တကူ Setupလုပ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Blackblazeက documents, music, video, external drivesစတာတွေကို Backupလုပ်ပေးနိုင်ပေမယ့် ဖိုင်အမျိုးအစားအားလုံးကို Backup လုပ်မပေးနိုင်ပါဘူး။ Backblazeက Backupမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဖိုင်အမျိုးအစားတွေကို ဒီPageမှာကြည့်ပါ။ Unlimited Storageရရှိမှာ ဖြစ်ပေမယ့်4gbထက်ကြီးတဲ့ ဖိုင်တွေကိုတော့ Backupလုပ်မပေးနိုင်ပါ။ Client Applicationက Backgroundမှာ Runပြီးအလိုလို Backupလုပ်ပေးနေမှာ ဖြစ်ပြီး Encryptလုပ်ပြီး Backupလုပ်ပေးမှာပါ။ Windows and OS Xမှာသုံးနိုင်ပြီး Incremental Backupလည်း လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။Backblazeရဲ့ Pricingတွေကို ဒီPageမှာဖတ်ပါ။
CrashPlanက သင့်ကွန်ပြူတာက ဖိုင်တွေကို Backupလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် Networkတစ်ခုထဲက ကွန်ပြူတာတွေ၊ အင်တာနက်က တစ်ဆင့် တစ်ခြားကွန်ပြူတာက ဖိုင်တွေကိုပါ Backupလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Backgroundမှာ Runပြီး Backupလုပ်ပေးနေမှာဖြစ်ပြီး Encryptလုပ်ပြီး သိမ်းပေးမှာပါ။ Differentials and Incrementals Backupလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Backupလုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်တွေကို Mobile Deviceတွေ ကနေလည်း ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။CrashPlanရဲ့ Featuresတွေကို ဒီPageမှာဆက်ဖတ်ပါ။ CrashPlanရဲ့ Plansကို ဒီPageမှာ အသေးစိတ် ဖတ်ရှုပါ။
Privacyနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ချချင်ရင်တော့ SpiderOakကိုသုံးပါ။ သူ့ရဲ့ “Zero Knowledge” Policyက သူ့Serverမှာ သင်ဘာဖိုင်တွေ သိမ်းထားလဲဆိုတာ သူတို့ကိုယ်တိုင်တောင် မသိရအောင် လုံခြုံစေပါတယ်။ သင့်ကွန်ပြူတာက desktop, documents, email, music, or movies တွေအပြင် external drives, network drivesတွေကဖိုင်တွေ အားလုံးကို သိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ Windows, OS X, and Linuxမှာ သုံးနိုင်ပြီး IOS, Android Devicesတွေအတွက် Applicationတွေလည်း ရှိပါတယ်။ Incrementals Backupလည်း လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။SpiderOak ရဲ့Plans အသေးစိတ်ကို ဒီPageမှာဖတ်ပါ။
Bitcasa Client Applicationကို Windows and OS Xမှာသုံးနိုင်ပြီး ဖိုင်တွေကို Backup And Syncလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်တွေကို Encrypt လုပ်ပြီးသိမ်းပေးနိုင်ပြီး File History Featuresပါရှိတဲ့အတွက် ဖိုင်တစ်ခုရဲ့Older Version , Newer versionတွေကိုပါ သိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။Android ,IOS,Windows Phoneတွေအတွက် Applicationတွေ ရှိပါတယ်။ Bitcasaက Freeအသုံးပြုရင် 10 GB Storageရရှိမှာဖြစ်ပြီး Unlimited Storageရဖို့အတွက် တစ်လ 10 Dollar ဒါမှမဟုတ် တစ်နှစ် 99 Dollar၀ယ်ယူ အသုံးပြုရမှာပါ။ Pricingကို ဒီPageမှာ လေ့လာပါ။
လယ်ခွန် ပြေစာအတုဟု ပြောသည့် မြေစာရင်းဌာနကို သမ္မတထံ တိုင်ကြားမည်ဟုဆို
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှ ဆုံးရှုံး လယ်ယာမြေများ ပြန်လည် ရရှိရေးအတွက် ထွန်တုံးတိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲခဲ့ သော လယ်သမားများ၏ လယ်ခွန် ပြေစာများ ကို မြေစာရင်း ဦးစီးဌာန တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက အတုများ ဖြစ်သည် ဟု ပြောဆိုခဲ့သဖြင့် ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် နိုင်ငံတော် သမ္မတထံ သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် တိုင်ကြားမည် ဖြစ်ကြောင်း လယ်သမားများအရေး ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေး နေသည့် ဦးမောင်မောင်အေးက ဆိုသည်။
၁၉၉၃ ခုနှစ်ကတည်းက ဒေသ အာဏာပိုင်များနှင့် ဒေသခံ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များက အကြောင်း အမျိုးမျိုး ပြကာ သိမ်းယူထားသည့် လယ်ယာမြေများနှင့် ပတ်သက်၍ ကူညီ ဖြေရှင်းပေးရန် မော်လမြိုင်ကျွန်း မြို့နယ် မြေစာရင်း ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြရာ ယခု တောင်းဆိုသော လယ်မြေ များသည် မြေလွတ် မြေရိုင်းများ ဖြစ်သဖြင့် လယ်သမားများနှင့် မသက်ဆိုင် ဟု ဌာနက ပြောဆိုကြောင်း၊ ယင်းကြောင့် လယ်သမားများက လယ်ခွန် ပြေစာများ ထုတ်ပြခဲ့ရာ ပြေစာများမှာ အတု ဖြစ်သည် ဟု မြေစာရင်း ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ခံ ဖြစ်သူက ပြန်လည် ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း လယ်သမားများက တညီတညွတ်တည်း ပြောကြားသည်။
မော်လမြိုင်ကျွန်း၊ ဝါးခယ်မ၊ ဘိုကလေးနှင့် ကျိုက်လတ် မြို့နယ်တို့မှ လယ်သမား ၃၀ ကျော် စုပေါင်း လက်မှတ် ရေးထိုးကာ သမ္မတထံ တိုင်ကြား မည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ သတင်းစာဆရာများ ကွန်ရက် ရုံးခန်းတွင် ယနေ့ ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ် သည်။
မတရား သိမ်းဆည်းခံ လယ်မြေများ ပြန်လည် ရရှိရေးအတွက် ဇူလိုင်လ အတွင်းက လယ်သမား တစ်ထောင်ကျော် ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ခဲ့ရာ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရဲမှူး၊ မြေစာရင်း ဦးစီးမှူးနှင့် တရားသူကြီးတို့ က ဖြေရှင်းပေးရန် အချိန် သုံးလ စောင့်ပါဟု ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း ယနေ့ အထိ တစ်စုံတစ်ရာ ဖြေရှင်းပေးခြင်း မရှိသေးကြောင်း မော်လမြိုင်ကျွန်း မြို့နယ် တံခွန်တိုင် ကျုံဝါးကျေးရွာမှ လယ်သမား တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“ကျွန်တော်တို့မှာ ငွေလည်း မရှိ၊ ပညာလည်း မတတ်တော့ ကျွန်တော်တို့ ဘာပြောပြော သူတို့က အရေးယူ မပေးဘူး” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
လယ်ယာမြေများအတွက် လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီကို ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ် မြေတိုင်း စာရေး၊ လယ်သမား ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ရပ်မိရပ်ဖ နှစ်ဦးတို့ဖြင့် အာဏာပိုင်များက ဖွဲ့စည်း ပေးရာတွင် ဒေသခံ လယ်သမားများ၏ အကျိုးကို ကိုယ်စား မပြုသူများ ပါဝင်နေကြောင်း လယ်သမားများက ပြောကြားသည်။
မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်တွင် ထွန်တုံး တိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲခဲ့သည့် လယ်သမားများ ကို လယ်သိမ်းထားသူ များက ပြန်လည် တရား စွဲဆိုထားကြောင်း၊ မြို့နယ် တရားရုံးတွင် နေ့စဉ် လယ်သမား ၉၀ ဝန်းကျင်မှာ တရား ရင်ဆိုင်နေ ရကြောင်း၊ အမှုကို ထိရောက်စွာ မစစ်ဆေးဘဲ ရုံးချိန်းကို မကြာခဏ ချိန်းဆိုနေသဖြင့် စရိတ်စက များစွာ ကုန်ကြောင်း ၎င်းတို့က ဆက်လက် ပြောဆိုသည်။
ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ လုပ်ကိုင်ရန် တင်ဒါ အောင်မြင် ထားသော နော်ဝေ ကုမ္ပဏီ Telenor အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက် တည်ဆောက်ရန် တရုတ် အခြေစိုက် Huawei ကုမ္ပဏီကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီများထံမှ စုံစမ်း သိရှိရသည်။
Telenor အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံရှိပြီး Huawei က မြန်မာနိုင်ငံ ဈေးကွက်နှင့် ရေမြေ အနေအထားကို ကျွမ်းကျင်သည့် အတွက် ရှယ်ယာ ဝေစု အများဆုံးဖြင့် အဓိက လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ယင်းကုမ္ပဏီများထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းအတွက် Huawei က အမေရိကန် ဒေါ်လာ တစ် ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမည် ဖြစ်ပြီး ကနဦး အသုံးစရိတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကာလ ငါးနှစ်နှင့် လုပ်ငန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကာလ ရှစ်နှစ် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
Huawei က ဆက်သွယ်ရေး တာဝါတိုင်များကို ရန်ကုန်မြို့ အပါအဝင် အချက်အချာကျသော နေရာ များတွင် တည်ဆောက်ခြင်း၊ ကြိုးမဲ့ (Wireless) စက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး စက်ပစ္စည်းများ ပေးသွင်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း လုပ်ငန်း သဘောတူ အချက်အလက်များအရ သိရသည်။
Huawei က အခြား ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်သော Oredoo နှင့် လည်း ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်း လက်လီ ရောင်းချသည့် လုပ်ငန်း ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိရန် ပြင်ဆင်နေသည်။
Huawei ကုမ္ပဏီသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ ထိပ်တန်း အော်ပရေတာ ၅၀ တွင် ၄၅ ခုနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်း များ ပေးသွင်းခြင်းလုပ်ငန်း ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်နေပြီး ယင်းကုမ္ပဏီများ တွင် မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းထံ၌ ဆက်သွယ်ရေး တင်ဒါ လိုင်စင် အတွက် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီ ၁၁ ခုလုံး ပါဝင်သည်။
Telenor ကုမ္ပဏီသည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ စတင်၍ Huawei နှင့် ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး Huawei သည် လက်ရှိ တယ်လီနော၏ အဓိက ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်း ထောက်ပံ့သူ ဖြစ်သည်။
Huawei ကုမ္ပဏီသည် အာရှနှင့် ဥရောပတွင် အောင်မြင်မှုများ ရရှိနေပြီး ဈေးကွက်ဝေစု အများစုအား ချုပ်ကိုင်ထားနိုင်သော်လည်း အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်မူ တရုတ်အစိုးရနှင့် ဆက်နွှယ်မှု ရှိနေသည်ဟု စွပ်စွဲခြင်း ခံထားရပြီး လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်ခြင်းအား လွှတ်တော်မှ တားမြစ်ထားသည်။
via Voice Daily
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေး ကောလဟာလ Post အား Like လုပ်မှုအတွက် ထောင်ထဲပို့
ထူးခြားဖြစ်စဉ်ပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အစိုးရမှ Ban ထားတဲ့ နိုင်ငံရေး သတင်းဖော်ပြ Facebook Page တစ်ခု ရှိပါတယ်။ ယင်း Page မှ ထိုင်းနိုင်ငံ စစ်တပ်နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ မဟုတ်မမှန် သတင်း၊ကောလ ဟာလကို Post တင်ခဲ့ပြီး Like လုပ်သူ လေးယောက်ရှိခဲ့ ပါတယ်။
ယင်း Like လုပ်သူ ၄ ယောက်ကံဆိုးပါတယ်။ စစ်ဆေး ဖမ်းဆီးမှုကိုခံရပြီး အရေးယူခံရမှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ Social Media ပေါ် Like နဲ့ Share လုပ်ပြီး ကောလဟာလ ဖြန့်ဝေ မှု အတွက် ထောင်ချ၊ တရားစွဲမှုဟာ အထူးခြားဆုံး ဥပဒေ ဖြစ်လာကြောင်း သိရပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့  ပြည်သူတို့ Social Media သုံးစွဲမှုအပေါ် များစွာ တုန့်လှုပ်ခြောက်ခြားစေခဲ့ ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးနဲ့ သက်ဆိုင် တဲ့ Post ကိုပဲ ပြောထားသေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တင်သူရော၊ Like လုပ်သူရော၊ Share သူကိုရော အရေးယူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ လေးယောက်က လည်း စာနယ်ဇင်းလောက ကပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်နောင်လည်း ယင်းကဲ့သို့ အလား တူ ပြစ်မှုမျိုးများ အခြားသူတုိ့ မကျူးလွန်စေရန် ထိုင်း အာဏာပိုင် တို့က သတိပေးထားကြောင်း သိရပါတယ်။
ကတုံးတုံးပြီး ကျောင်းလာလို့ ကျောင်းအုပ်က ဆံပင်တုဝတ်ခိုင်း
ကလေးငယ်များ ကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းအတွက် မိမိ၏ဆံပင်များကို ကတုံးတုံးပြီး ရန်ပုံငွေရှာလိုတဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ အသက်(၁၅)နှစ်အရွယ် ကျောင်းသူကလေး(၅)ဦးသည် သူမတို့၏ ကျောင်းအုပ်ထံ ခွင့်တောင်း ရာ ကျောင်းအုပ်က ကတုံး တုံးပြီး ဆံပင်တုဝတ်ပါမည်ဟူသော ကတိပြုချက်ဖြင့် ၎င်းတို့အား ခွင့်ပြု ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ကြောင့် ပြီးခဲ့သည့် စနေနေ့က ပြုလုပ်ကျင်းပသော Hair for Hope ပွဲတွင် ၎င်းတို့က ကတုံးတုံးခဲ့ပြီး ကျောင်းပြန် တက်သည့် အခါတွင် ၎င်းတို့(၅)ဦးထဲမှ သုံးဦးသာ ပေးထားသည့် ကတိအတိုင်း ဆံပင်တု ဝတ်လာ၍ ကျန်နှစ်ဦးမှာ ကတုံးပြောင်နှင့် ကျောင်းလာခဲ့သောကြောင့် ကျောင်းအုပ်က ၎င်းတို့အား စာသင်ခန်း ထဲမှ ထွက်ခိုင်းခဲ့တာမို့ ကူညီသော အခြား ကျောင်းသားမိဘများနှင့်အတူ စင်္ကာပူဒေါ်လာ (၇၀)တန် ဆံပင် တုများကို သွားထွက်ဝယ်ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ ထိုကျောင်းစည်းကမ်းအရ ကျောင်းသူကလေးများသည် ပန့်ဆံပင် ပုံစံမျိုး ၊ မိန်းမ မဆန်သောဆံပင်ပုံစံမျိုး ၊ လျော့တိလျော့ရဲ မသေမသပ် ဆံပင်ပုံစံမျိုးမထားရကြောင်း သိရသည်။
အကယ်၍ ဆံပင်တုကြောင့် ခေါင်းတွင် အပူနာများ ဖြစ်ရကြောင်း ဆရာဝန်၏ထောက်ခံချက် ပါရှိပါကမူ ကတုံး ဆံပင်ဖြင့် စာသင်ခန်းတွင်း ဝင်ခွင့်ပြုကြောင်း သိရသည်။
မိမိကိုယ်ကို အကဲဖြတ်ဖို့ ပြည့်တန်ဆာများနှင့် ဆက်ဆံခဲ့သော ခေါင်းများအား ထောင် (၄) လချ
ဆယ်ကျော်သက်ပျိုမေတို့ အသည်းစွဲ ဂျပ်စတင်ဘီဘာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လိုပင်ကျရှုံးခဲ့ ရပေမယ့် သူမရဲ့အစွမ်းအစတွေ ကို အကောင်းဆုံးထုတ်ပြနိုင်ခဲ့ပြီ ဆိုတာကို ဆယ်လီနာဂိုမက်က အလုပ်နဲ့သက်သေပြသွားပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ကာလီ
ဖိုးနီးယား ရှိ ဆန်တာမော်နီတာမှာ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ဟောလိ ၀ုဒ်လူငယ်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲမှာ သူမ က အဓိကဆုတွေကို ဆွတ်ခူးနိုင် ခဲ့တာပါ။ သြဂုတ်လ ၁ ရက် ကြာသာပတေးနေ့မှာ ကျင်းပခဲ့ တဲ့အဆိုပါဆုပေးပွဲမှာတော့ဆယ် လီနာဟာ ပရိသတ်ကြိုက်နှစ် သက်ဆုံး တေးအယ်လ်ဘမ်ဆုနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်ဆုံးဖျော်ဖြေ ရေးဆုတွေကို ရရှိခဲ့တာပါ။ အဆို ပါဆုနှစ်မျိုးစလုံးကိုသူမရဲ့နောက် ဆုံးထွက် တေးအယ်လ်ဘမ်Star Dance ဖြင့် ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းကွဲဝေဒနာတွေကိုအောင် မြင်မှုအတွက် ချနင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမ ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ အများက လေးစားအတုယူဖွယ်ရာပါပဲ။
Ref : Gossip Centerခိုင်မာ
ကျောက်စိမ်း အလွန်အကျွံ ဆက်၍တူးဖော် ထုတ်လုပ်နေလျှင် ဖားကန့်ဒေသ ရှိ မြို့ရွာများအားလုံး နှစ် ၃၀ မတိုင်မီ ပျောက်ကွယ်ဖွယ်ရှိကြောင်း ဒေသခံ များဆို
အင်ဒို ဗုဒ္ဓဘုရားကျောင်း ဗုံးကွဲမှု မြန်မာပြည်နဲ့ဆက်နွယ်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျကာတာမြို့မှာရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းဝင်း အတွင်း တနင်္ဂနွေနေ့က ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက် လူ ၃ ဦး ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီဗုံးပေါက်ကွဲမှုဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက ရိုဟင်ဂျာ မူဆလင်တွေအပေါ် အကြမ်းဖက် ဖိနှိပ်မှုတွေကို လက်စားချေတဲ့အနေနဲ့ အခုလို ဗုံးပေါက်ခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း အင်ဒိုနီးရှား အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။
ဗုံးပေါက်ကွဲတဲ့နေရာမှာ “ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ အော်ဟစ်သံကို ကျွန်ုပ်တို့ ကြားရပါတယ်” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ စာရေးထားခဲ့တာကို တွေ့ရတယ်လို့ အင်ဒိုနီးရှား ဘာသာရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီး ဆူရာဒါမာ အလီ (Suryadharma Ali) က ပြောပါတယ်။
အနောက် ဂျကာတာမှာရှိတဲ့ Ekayana ဘုန်းကြီးကျောင်းအတွင်း တနင်္ဂနွေနေ့ညက လူတွေ ဘုရားရှိခိုးနေတဲ့အချိန် သိပ်အင်အားမပြင်းလှတဲ့ ဗုံးတလုံး ပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။ နောက်တလုံးကတော့ မီးခိုးပဲထွက်ပြီး မပေါက်ကွဲခဲ့ဘူးလို့ အင်ဒိုနီးရှား ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ မပေါက်ကွဲသေးတဲ့ တတိယ ဗုံးတလုံးကိုလဲ တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မနှစ်က ဒေသခံ ရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေအကြား အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေ အပြန်အလှန် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ထောင်နဲ့ ချီတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ အိုးအိမ် စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးခဲ့ကြတာမှာ တချို့လည်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကို လှေနဲ့ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြသူတွေလည်း ရှိနေတာပါ။
အဲဒီလို မြန်မာနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဖက်က ထွက်ပြေးလာကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ တခြား နိုင်ငံက ဒုက္ခသည်တွေဟာ သြစတေးလျနိုင်ငံမှာ ခိုလှုံခွင့်ရဖို့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကတဆင့် ခိုလှုံကြလေ့ ရှိပါတယ်။
ဒတ်ခ်ျ ဓာတု ပညာရှင်တွေ ကနေ ပထမဆုံး ထုတ်လုပ် လိုက်တဲ့ ဓာတ်ခွဲခန်း ထုတ် ဘာဂါ ကို လန်ဒန်မြို့မှာ ပထမဆုံး အဖြစ် ချက်ပြီး စားပြ ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
နွားက ထုတ်တဲ့ ဆဲလ်တွေကို နယ်သာလန် ဓာတ်ခွဲခန်း တခုမှာ အမဲသား အမျှင် အကြော တွေ ဖြစ်လာအောင် လုပ်ပြီး ဒီဘာဂါ အသားကို ထုတ်လုပ် ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဘာဂါကို စားခဲ့တဲ့ အကဲဖြတ် တဦးက အသားနဲ့ အတော် ဆင်တယ် လို့ ပြောပါတယ်။ တခြားအကဲခတ် အတဦးကတော့ အရသာဟာ အမဲသားနဲ့ နည်းနည်း ကွာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီဘာဂါ ဖြစ်လာဖို့ ကုန်ကျ စားရိတ်ကတော့ ဒေါ်လာ ၃ သိန်းလောက် ရှိခဲ့ပါတယ်။
ရွှေဂုံတိုင် တံတား စီမံကိန်းကြောင့် ယင်းလမ်းကို တစ်လခွဲခန့် ပိတ်မည်
နန်းမြင့် | အင်္ဂါနေ့၊ သြဂုတ်လ ၀၆ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၀၇ နာရီ ၃၇ မိနစ်
လက်ရှိ တည်ဆောက်နေဆဲဖြစ်သည့် ရွှေဂုံတိုင် ခုံးကျော်တံတား စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် ယင်းလမ်းကို တစ်လခွဲခန့် ပိတ်သွားမည်ဖြစ်သည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ယာဉ်စည်ကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ကြီးကြပ်မှုကော်မတီနှင့် ယင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်သည့် ကုမ္ပဏီမှ သိရသည်။
လမ်းပိတ်ထားခြင်းကို ဩဂုတ် ၆ ရက်မှ စက်တင်ဘာ ၁၈ရက်အထိ ရက်သတ္တပတ် ခြောက်ပတ် ပိတ်ထားမည်ဖြစ်ပြီး ပိတ်ထားသည့် ကာလအတွင်း ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမှ ဖြတ်သန်းမည့်ယာဉ်များသည် အနောက် ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ ရေတာရှည်လမ်းကြား တောရလမ်းများမှ ဖြတ်သန်းသွားလာရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ယာဉ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှ
ယင်းသို့ လမ်းပိတ်ထားသော်လည်း ယာဉ်ငယ်များသွားလာနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ခရီးသည်တင်ယာဉ်များနှင့် အမြင့် ၁၀ ပေနှင့် အထက်ပိုသော ယာဉ်လတ်များ၊ ယာဉ်ကြီးများ အန္တရာယ်ကင်းစွာသွားလာနိုင်မည့် အမြင့်ကင်းလွတ်ချက် မရှိသောကြောင့် ယင်းယာဉ်များသည် ရှောင်ကွင်းလမ်းများက သွားလာကြရမည်ဖြစ်သည်။
ရွှေဂုံတိုင် လမ်းဆုံတည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းကြောင့် ရွှေဂုံတိုင်မီးပွိုင့် တောင်ဘက်ခြမ်း (မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတိုက်နေရာမှ မီးပွိုင့်အထိ) ရှိ တံတားတိုင် အမှတ် P4. P3. P2. P1. P200 နှင့် P100 တို့တွင် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန်အတွက်
ယင်းသို့လမ်းပိတ်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး Capital Development ကုမ္ပဏီမှ ရွှေဂုံတိုင်ခုံးကျော်တံတားစီမံကိန်း ဒါရိုက်တာ
ဦးအေးသော်က “လမ်းကို ခြောက်ပတ်ကြာ ပိတ်သွားပါမယ်” ဟု ပြောသည်။
ရွှေဂုံတိုင် ခုံးကျော်တံတားကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်တွင် ပန္နက်တင် တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လာမည့် နိုဝင်ဘာ တတိယအပတ်အတွင်း ဖွင့်လှစ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်ဟုလည်း ဦးအေးသော်က ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်မြို့၌ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများ ပြေလည်စေရန်အတွက် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုအများဆုံး လမ်းဆုံများဖြစ်သည့် လှည်းတန်း၊ ရွှေဂုံတိုင်၊ ဘုရင့်နောင် လမ်းဆုံတို့ကို ခုံးကျော်တံတားများဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး လှည်းတန်း ခုံးကျော်တံတားကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ပန္နက်တင်၍ စတင် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၀ ရက်တွင် ယာဉ်များ စတင်သွားလာနိုင်ခဲ့သည်။
ဆောက်လုပ်ဆဲ ခုံးကျော်တံတားများမှာ ရွှေဂုံတိုင်နှင့် ဘုရင့်နောင်ခုံးကျော်တံတားတို့ ဖြစ်သည်။ ဘုရင့်နောင် ခုံးကျော်တံတားကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်းမှ စတင် တည်ဆောက်ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ပဲခူးတိုင်း ဖြူးမြို့နယ် ရဲစခန်းမှ ရဲလေးဦးကို လူသတ်မှုဖြင့် အဆိုပါ ရဲစခန်း၏ စခန်းမှူး အုန်းကျော်က တောင်ငူခရိုင် တရားရုံးတွင် တရားစွဲ ဆိုထားရာ သြဂုတ် ၂ ရက်တွင် ယင်းအမှုကို တရားသူကြီးက စွဲချက်တင် လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ အတွင်းက အရက်သေစာ သောက်စား ထားသည့် ဖြူးမြို့မှ လူငယ်တစ်ဦးကို ရဲလေးဦးက ရဲစခန်းသို့ ခေါ်ဆောင်ထိန်းသိမ်းစဉ် သေဆုံးသွားမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ၎င်းတို့ကို စွပ်စွဲကာ ယခုလို တရားစွဲဆို ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ရဲလေးဦးက စခန်းတွင်ခေါ်ဆောင် ထိန်းသိမ်းစဉ် သေဆုံးသွားခဲ့သူမှာ အသက် ၂၄ နှစ် အရွယ် ကိုလင်းလင်းထက် ဆိုသူဖြစ်ပြီး သူသည် သေဆုံးချိန်အထိပြစ်မှုကြောင်းအရ တစ်စုံတစ်ရာ အမှုဖွင့်ခံထားရခြင်းပင် မရှိသေးကြောင်း သေဆုံးသူ၏ အမဖြစ်သူက မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
သို့သော် တောင်ငူခရိုင်တရားသူကြီး၏ စွဲချက်ကို ရဲများက “အပြစ်မရှိပါဘူး၊ သက်သေရှိပါတယ်” ဟု ခုခံခဲ့ကြောင်း တရားခွင်၌ သွားရောက်လေ့လာခဲ့သော သေဆုံးသူ၏ အမဖြစ်သူ မမြင့်ခက်ခက်မွန်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ယခုအမှုကို သြဂုတ် ၁၄ ရက်တွင် ထပ်မံစစ်ဆေးရန် တရားသူကြီးက ချိန်းဆိုလိုက်ကြောင်း သေဆုံးသူ၏ ဖခင် ဦးလှမြင့်က ပြောသည်။
အသက် မပြည့်သည့် မိန်းကလေးကို အဓမ္မကျင့်သူအား ထောင်ဒဏ် ၈ နှစ်ချမှတ်
နန်းဆိုင်နွမ်| August 5, 2013
အခြိမ်းခြောက်ခံခဲ့ရသည့် မိန်းကလေး (ဓာတ်ပုံ – နန်းဆိုင်နွမ် / ဧရာဝတီ)
အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးကို ခြိမ်းခြောက် အဓမ္မ ကျင့်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးမြင့်အောင်အား ယနေ့ ရန်ကုန်တိုင်း အရှေ့ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးမှ ထောင်ဒဏ် ၈ နှစ် ချလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ဆိုင်ရှင် အမျိုးသားကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက်နေ့က မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ် ရဲစခန်းတွင် ချုပ်ထားကာ (ပ) နံပါတ် ၃၅/ ၁၃/ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၇၆ တိုင်ကြားစွဲဆိုခဲ့သည့် အမှုအား ထောင်ဒဏ် ချလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ကလေးသူငယ် ကူညီ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ မှ ဒေါ်လေးလေးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“အသက်မပြည့်တဲ့ ကလေးငယ်ကို အဓမ္မကျင့်ပြီး ဆေးတွေတိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကလေးမကို ဟိုပို့ဒီပို့ လုပ်တယ်။ အဲဒါကို ကြည့်ပြီးတော့ ထောင်ဒဏ် ၈ နှစ်ပဲချတယ်ဆိုတာ ပိုဆိုးပါတယ်။ ဒါမဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပဲ။ ကျမ သိသလောက်ဆိုရင်တော့ တရားခံကို ထောင်ဒဏ် ၁၅ နှစ်ကနေ အနှစ်၂၀ အနည်းဆုံး ချနိုင်တယ်” ဟု ဒေါ်လေးလေးက ဆိုသည်။
အရွယ် မရောက်သေးသည့် ကလေးတဦးကို အဓမ္မကျင့်ကာ ထောင်ဒဏ် နှစ်အနည်းငယ် ချလိုက်သည့် အတွက် မထိုက်တန်ကြောင်း၊ ယခု ကလေး၏ ဘ၀ ရပ်တည်ရန်နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြန်လည်ရှင်သန်ရန် အချိန်များစွာ ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဓမ္မကျင့်ပြီး ဆေးများစွာ တိုက်ကျွေးခဲ့သဖြင့် ကလေး၏ ကျန်းမာရေးမှာ မကောင်းနိုင်တော့ကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
“ကျနော့်ရဲ့ တူမက အခုဆိုရင် နေ့တိုင်းလိုလို ဗိုက်အောင့်နေတယ်။ ကျန်းမာရေး မကောင်းတဲ့ ကြားကနေ တရားရုံးကိုသွား ရတယ်။ အသက်အရွယ်နဲ့ မလိုက် အနိုင်ကျင့်ခံရပြီး တရားခံကို အမိန့်ချတော့ ထောင်ဒဏ် ၈ နှစ်ဆိုတာ အရမ်းနည်းတယ်။သူ့ဘ၀ ရပ်တည်ဖို့အတွက် တော်တော် ရှက်နေတယ်” ဟု ကလေး၏ အုပ်ထိန်းသူ ဦးတင်ဌေးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ရန်ကုန် မြောက်ဥက္ကလာပရှိ ချယ်ရီ စားသောက်ဆိုင်တွင် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်က လုပ်အားခ တလ ကျပ် ၁ သောင်းခွဲဖြင့် အလုပ်လုပ်ရန် မိဘများက အပ်နှံခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းကို ဆိုင်ရှင် အမျိုးသားက ၆ ကြိမ်တိုင်တိုင် အဓမ္မ ပြုကျင့်ခဲ့ပြီး ဆိုင်ရှင်၏ ဇနီး သိရှိသွားသည့် နောက်ပိုင်းတွင် ပြဿနာ တစုံတရာ ဖြစ်လာမည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် ဆိုင်ရှင်အမျိုးသား၏ အစ်မအိမ်သို့ တလခန့် ပို့ထားခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် မြောက်ဥက္ကလာပ ရောင်ခြည်သစ် လ္ဘက်ရည်ဆိုင်သို့ ပို့ထားခဲ့ပြီး ၎င်းနေရာတွင် မလုံခြုံဟု ယူဆကာ လာရောက်ခေါ်ယူ၍ အောင်မင်္ဂလာ ကားဝင်းရှိ သန့်စင်ခန်းတွင် ၃ လခန့် သွားရောက် ကူညီလုပ်ကိုင်စေခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းနေရာတွင် မကြာခဏ လာရောက် ခြိမ်းခြောက်ကြကြောင်း၊ ၎င်းနောက်တွင်မှ နေအိမ်သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်ကို ရှာတွေ့ကာ ဆက်သွယ်ခဲ့ရကြောင်း မိန်းကလေးက ၎င်း အဖမ်းမခံရမီ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ဧရာဝတီကို ရှင်းပြခဲ့သည်။
အဓမ္မမှုဖြင့် ချုပ်နှောင် ခံထားရသူ စားသောက်ဆိုင် ပိုင်ရှင် ဦးမြင့်အောင်၏ ဇနီးက ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် အဆိုပါ မိန်းကလေးသည် ကျပ် ၃ သိန်းတန် လက်ပတ်နာရီနှင့် ပိုက်ဆံ ကျပ် ၂ သောင်း ခိုးယူခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန် မြောက်ဥက္ကလာပ ရဲစခန်းသို့ တိုင်ကြားခဲ့ပြီး (ပ) နံပါတ် ၁၀၄/ ၁၃ ပုဒ်မ ၃၈၁ ဖြင့် ပြန်လည်တရားစွဲဆိုထားကာ ရန်ကုန်
နတ်မောက်လမ်းရှိ အမျိုးသမီး ကလေးသူငယ် စောင့်ရှောက်ရေး ကျောင်းသို့ ၂၄ ရက်နေ့က ပို့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မိန်းကလေးဘက်မှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် ရှေ့နေကွန်ရက်မှ ဦးအောင်သိန်းက “တကယ်ဆိုရင် ခရိုင် တရားရုံးကနေပြီးတော့ ဒီလိုအမှုကို ၁၀ နှစ်ကနေ တသက်တကျွန်းအထိ စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။အခုတော့ ထောင်ဒဏ် ၈ နှစ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ များတယ် နည်းတယ်ဆိုတာ မပြောချင်တော့ပါဘူး။ တချို့ ကလေးသူငယ် အမှုတွေတောင် ကျနော်တို့ မဖော်ထုတ် နိုင်တာတွေ ရှိခဲ့တာပဲလေ။ ကလေး အမှုတွေက ပျောက်သွားတာ များပါတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
အလားတူ တံတားဦးမြို့နယ်တွင် ၂၀၁၃ ခုနစ်မတ်လ ၈ ရက်နေ့က အကြော်ရောင်းသည့် အသက် ၃၄ နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီးအား အဓမ္မကျင့် ပစ္စည်းယူလူသတ်ခဲ့သူကို (ပ) ၁၄/၂၀၁၃ ပုဒ်မ ၃၉/ ၃၀၂/ ၃၇၆ ဖြင့် စွဲချက်တင်ပြီး ကျောက်ဆည် ခရိုင်တရားရုံးက ဇူလိုင် ၃၀ ရက်နေ့က သေဒဏ် ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများ ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ သဘောတူစာချုပ်ကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးမှ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် စတင် လက်မှတ် ရေးထိုးချုပ်ဆို ခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၉၉ ခုနှစ် ရောက်မှသာလျှင် လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း၊ စာချုပ်တွင် အချက်ပေါင်း ၅၄ ချက်ပါဝင်ပြီး အချက် ၄၀ အထိ ကလေး အခွင့်အရေးများ ဖော်ပြထားကာ၊ ကျန် ၁၄ ချက်သည် အစိုးရများ ဘက်မှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည့် အပိုင်းကို ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကလေးသူငယ်၏ အသက် အပိုင်းအခြားကို နိုင်ငံတကာတွင် ၁၈ နှစ်အရွယ်အထိ သတ်မှတ်ထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူ အသက် ၁၆ နှစ်အထိသာ ကလေးအဖြစ် သတ်မှတ်၍ အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်ကို လူငယ်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။
မြ၀တီမြို့ မှာ ရေကျပြီးပေမယ့် မြို့သန့်ရှင်းရေးတွေ ဆက်လုပ်နေရဆဲဖြစ်သလို အကူအညီတွေလဲ လိုအပ်နေဆဲပါ။ ဒေါ်ခင်မင်းဇော် သတင်းပေးပို့ထားပါတယ် ။ ရိုက်ကူး ဖိုးစီ
အလုံ အကယ်ဒမီဆေးခန်းရှေ့ လုယက်မှုမှ တရားခံ(၃)ဦးအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှ (၄)ရက်အတွင်းဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီး
၃၁.၇.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၂၀၄၅ အချိန်ခန့်တွင် ကိုမြင့်ကျော်သန်း (ဘ)ဦးကျော်ညွှန့်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်နေသူသည် အစ်ကိုဖြစ်သူတို့နှင့်
အတူ အလုံမြို့နယ်၊ ဌာနရပ်ကွက်၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းရှိ အကယ်ဒမီဆေးခန်းတွင် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ မီးဖွားနေ၍သတင်း သွားရောက်မေးမြန်းစဉ် ၎င်းတစ်ဦးတည်း ၃င/---၊SWIFTယာဉ်အတွင်း
ကျန်နေခဲ့ချိန် အမည်မသိ အမျိုးသား(၃)ဦးမှ ယာဉ်အတွင်း
၀င်ရောက်လာကာ ဓါးဖြင့်ထောက်၍ ယာဉ်နှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွား ပြီးနောက် ချော်တွင်းကုန်းမီးပွိုင့်အနီးတွင်ချထားခဲ့ကာ ယာဉ်နှင့်
အတွင်းမှ Laptop (၁)လုံး၊ Apple Mini Ipad (၁)လုံး၊ Auto
အမျိုးအစား SIM ကဒ်ပါဖုန်း(၁)လုံးတို့ကို ယူဆောင်မောင်းနှင်
ထွက်ပြေး သွားသဖြင့် အရေးယူပေးပါရန် အလုံမြို့မရဲစခန်းသို့
တိုင်တန်းခဲ့၍ (ပ)၁၇၉/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၃၉၂ ဖြင့်အရေးယူ
အဆိုပါအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၊ အကူတပ်ဖွဲ့ခွဲ၊ လုံခြုံရေးတပ်ခွဲ (၂)မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် စုံစမ်းဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ အခင်းဖြစ်စဉ် ပါဆုံးသွားသည့်
ယာဉ်အား ဗဟန်းမြို့နယ်၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းတွင် ရပ်ထားသည်ကိုပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။
အမှုမှတရားခံများနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့ရာ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ဈေးကြီးအနောက်ရပ်ကွက်၊ ကွမ်းရွဲလမ်းနှင့်ကမ်းနားလမ်းထောင့်ရှိ အမှတ်(---)နေအိမ်မှ
တရားခံ ညီညီမင်းရှင်(ခ)ဇင်မင်းဦး (ဘ)ဦးဇော်မင်းသူ၊ ကန်အနောက်ရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်နေသူအား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး နေပြည်တော်သို့ တိမ်းရှောင်ရန်ထွက်ခွာသွားသူ ဥာဏ်လင်းထက်(ခ)ကေတီ (ဘ)ဦးဝင်းတင်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊
နေပြည်တော်နေသူအား အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်းမှလည်းကောင်း၊ ကုဋေကျော် (ဘ)ဦးမောင်မောင်၊ ဈေးကြီးအနောက်ရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် နေသူအား လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ပုလဲမေ တည်းခိုခန်းမှလည်းကောင်း အသီးသီးဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသည်။
၎င်းတရားခံများ၏စစ်ဆေးချက်များအရ ၃၁.၇.၂၀၁၃ ရက်နေ့
၁၇၀၀ အချိန်ခန့်တွင် ကုဋေကျော်၏ နေအိမ်တွင်တွေ့ဆုံကြစဉ် လုယက်မှုတစ်ခုခုကျူးလွန်ရန်တိုင်ပင်ခဲ့ကြပြီး ဓါး(၂)ချောင်းအား ၀ယ်ယူခဲ့ကြကာ ဆင်မင်းဈေးမှတ်တိုင်၌ လမ်းလျှောက်၍ လုယက်မည့်လူနှင့်ကားတို့အား ရှာဖွေနေစဉ် အကယ်ဒမီဆေးခန်းရှေ့
အရောက် ၃င/---- ယာဉ်ပေါ်၌ အမျိုးသားတစ်ဦးတည်း IPad ဖြင့် ဂိမ်းကစား နေသည်ကိုတွေ့ရှိရ၍ ၎င်းတို့(၃)ဦးမှ ယာဉ်အတွင်း
၀င်ရောက်ကာ အဆိုပါအမျိုးသားအား ဓါဖြင့်ထောက်ပြီး ယာဉ်အားမောင်းနှင်ယူဆောင်ခဲ့ကြောင်း၊ ချော်တွင်းကုန်းမီးပွိုင့်
အနီးတွင် ယာဉ်ပေါ်ပါ အမျိုးသားအား ထားရစ်ခဲ့ပြီး ဆက်လက်မောင်းနှင်ခဲ့ကြောင်း၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသို့
ရောက်ရှိစဉ် ယာဉ်အားထားခဲ့ပြီး ယာဉ်ပေါ်ပါ Laptop (၁)လုံး၊
IPad (၁)လုံး၊ ဟန်းဆက် (၁)လုံးနှင့် ငွေကျပ် (၁၀၀၀၀)တို့အား ယူဆောင်လာခဲ့ကြကြောင်း၊ နောက်ရက်များတွင် Laptop ၊ IPad တို့အား ရောင်းချကာခွဲဝေသုံးစွဲခဲ့ကြောင်း၊ ဖုန်းအတွင်းမှ
SIM ကဒ်အားလွှင့်ပစ်ခဲ့ပြီး ဟန်းဆက်အား ဥာဏ်လင်းထက်မှ ကိုင်ဆောင်အသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။
ပစ္စည်းများအား ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခဲ့ပြီး ၎င်း တရားခံ(၃)ဦးအား အမှုဖြင့်အရေးယူနိုင်ရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း